मोदीको आगमन : कहाँ–कहाँ ‘डिस्टर्ब’ हुँदैछ सडक ? — Newskoseli
मोदीको आगमन : कहाँ–कहाँ ‘डिस्टर्ब’ हुँदैछ सडक ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई दिने नेपाल भ्रमणका लागि शुक्रबार जनकपुर हुँदै काठमाडौं आउने क्रममा राजधानी र देशका अरू विभिन्न भागमा कहाँ–कहाँ सडक ‘डिस्टर्ब’ हुँदैछ ? दैनिक गुजाराका लागि दौडधूपमा रहेका आम नेपालीका निम्ति यो चाहिँ चासोको विषय भएको छ ।
जनकपुरबाट उनी करिव १ः३० बजे हेलिकप्टरद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरित हुँनेछन् । मोदीको भ्रमणका कारण राजधानीका विभिन्न सडक नराम्ररी ‘डिस्टर्ब’ हुँदैछन् र यातायात प्रणाली नै प्रभावित हुने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री हिँड्ने रुटमा १५ मिनेट अगाडिदेखि मोटरसाइकल र साना गाडी निषेध गरिन्छ भने ठूला गाडी करिव आधा घन्टा अगाडि नै रोकिनेछ ।
विमानस्थलबाट हायात होटल, हायात होटलबाट टुँडीखेल, शितलनिवास र विभिन्न दलका नेताहरुसँग भेटघाटका लागि द्वारीका होटल जाने क्रममा सोही रुटका यातायात प्रभावित हुने महाशाखाले जनाएको छ । ‘भीभीआईपी सवारीको टाईममा विपरीत रुटमा २० मिनेट र सवारी रुटमा १० मिनेट अन्य सवारी रोक्ने कार्ययोजना बनाएका छौं,’ ट्राफिक महाशाखाका सहायक प्रवक्ता ९डीएसपी मुकुन्द मरासिनी० ले भने– ‘सवारी रुटमा ठूला गाडी र मालवाह ट्रकहरु आधा घन्टा अगाडि रोकिन्छन् ।’
विमानस्थलबाट मोदी बौद्धस्थित हायात होटल जानेछन् । ४ बजे गार्ड अफ अनसरका लागी चाबहिल, गौशाला, एयरपोर्ट, तीनकुने, बानेश्वर हुँदै सैनिक मञ्च प्रस्थान गर्दा ती रुटमा सवारी नराम्ररी प्रभावित हुनेछन् । ‘त्यति धेरै ट्राफिक डिस्टर्ब नहुने गरी मिलाएका छौँ,’ डीएसपी मरासिनी भन्छन्– ‘एक पटक रोकिएपछि अर्को पटक रोकिँदैन किनकि फरक रुटबाट राजकीय सवारीको रुट निर्धारण गरिएको छ ।’
सैनिक मञ्चमा गार्ड अफ अनरपछि मोदी ४ः३५ मा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँगको भेटका लागि बहादुरभवन जानेछन् । ५ बजे राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग औपचारिक भेटघाट गरेपछि उनी विभिन्न दलका नेताहरुसँगको भेटघाटका लागि महाराजगञ्ज, चाबहिल हुँदै द्वारिका होटलमा पुग्ने कार्यक्रम छ ।
मोदीको सवारीको समयमा एम्बुलेन्सलाई भने नरोकिने र सवारी हुनुभन्दा एक घन्टा अगाडि सम्बन्धित रुटमा होर्डिङ बोर्ड र डिजिटल बोर्डबाट सूचना उपलक्ध गराइने जानकारी ट्राफिक महाशाखाले दिएको छ ।